Common Mejọọ Azụmaahịa Mee Mgbe Ahọrọ A Marketing akpaaka Platform | Martech Zone
A ahịa akpaaka n'elu ikpo okwu (MAP) bụ sọftụwia ọ bụla na - emezigharị ọrụ ịre ahịa. Ihe ntanetị na-enyekarị njirimara akpaaka n'ofe email, mgbasa ozi mmekọrịta, idu ndú, ozi ozigbo, ọwa mgbasa ozi dijitalụ na ndị na-ajụ ha ase. Ngwaọrụ ndị a na-enye ebe nchekwa ahịa nke etiti maka ozi ahịa ka enwere ike ịkọwa mkparịta ụka site na iji nkewa na nkeonwe.
E nwere nnukwu nloghachi na ego mgbe ahia akpaaka nyiwe na-emejuputa atumatu n'ụzọ zuru ezu leveraged; agbanyeghị, ọtụtụ azụmaahịa na-emehie ụfọdụ dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ikpo okwu maka azụmaahịa ha. Ndị a bụ ndị m ka na-ahụ:
Emehie 1: MAP abụghị naanị maka Email Marketing
Mgbe izizi akpaaka nyiwe mbụ e mepụtara, Central elekwasị anya nke kasị bụ akpaaka email nkwukọrịta. Email bụ ọwa dị ọnụ ala na nnukwu ROMI ebe azụmaahịa nwere ike soro ma kọọ arụmọrụ ha. Agbanyeghị, email abụghị naanị ọkara. Marketingre ahịa bụ izipu ndị ahịa ziri ezi ozi ziri ezi na oge kwesịrị ekwesị - na MAP na-enyere nke a aka.
Ihe Nlereanya: N’oge na-adịghị anya, m nyeere onye ahịa aka ịgba ọsọ webinar ha na-eme ka igwe nrụpụta ọrụ ahịa ha. Site na ndebanye aha tupu oge, nnabata ihe omume ụbọchị, na ntinye ihe omume - ọ bụ usoro akpaghị aka gafere email na ntanetị ọwa ozi. Ọdịmma akpaaka azụmaahịa email agaghị enyere anyị aka imezu ebumnuche anyị.
Emehie 2: MAP Adabaghị na Ebumnuche Mgbasa Ozi
N'afọ ndị m nwere ahụmahụ na-arụ ọrụ nke ọma na ndị ahịa, ndị ahịa ọ bụla nwere echiche ha banyere mmasị ha. Ọtụtụ mgbe, onye na-eme mkpebi C-level na-adabere kpamkpam na ọnụahịa nke ikpo okwu na ihe ọ bụla ọzọ. Ma mgbe anyị na-enyocha nchịkọta teknụzụ ahịa ha, anyị chọpụtara ebe ndị na-enweghị usoro - ma ọ bụ ka njọ - anaghị eji ya ma ọlị.
Ihe mbu kwesiri iju mgbe ichoro MAP bu:
Kedu ihe mgbaru ọsọ ahịa gị na ọnwa 3?
Kedu ihe mgbaru ọsọ ahịa gị na ọnwa 12?
Kedu ihe mgbaru ọsọ ahịa gị na ọnwa 24?
Azụmaahịa ahịa abụghị okwu na-adọrọ adọrọ ma ọ bụ na ọ bụ ọlaọcha ọlaọcha. Ọ bụ ngwa ọrụ iji nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị. Ya mere, na-arịọ mgbe niile ihe ị chọrọ iji mezuo ma melite MAP gị iji kwekọọ na ebumnuche ahịa gị ma tụọ akara ngosi arụmọrụ gị (KPIs).
Ihe Nlereanya: Onye ahịa e-commerce chọrọ ịbawanye ego site na ọwa email n'ihi na ọ bụ naanị ọwa ahịa azụmaahịa na-eji ugbu a ma ha nwere nnukwu nchekwa data. Ha nwere ike ọ gaghịdịrị mkpa akpaaka… ndị na-eweta ọrụ email (ESP) yana ọkachamara azụmaahịa email nwere ike ịnweta nsonaazụ niile. Kedu ihe bụ isi nke ifufu ihe karịrị ugboro ise iji were MAP na-eme otu ihe ahụ?
Emehie 3: Ejiri ụgwọ Mmeju MAP
Kedu otu onye otu gi siri mara? Talent nwere ike bụrụ ihe kachasị mkpa mgbe ị na-etinye ego na MAP, mana ọtụtụ ndị azụmaahịa na-eme nhọrọ a na-elegharakarị ya anya. Iji mezuo ebumnuche ahia gị, ịchọrọ onye ga-ejikwa ya zuru oke na-eme ihe ngosi gị ma jiri ya mepụta mkpọsa gị.
Ihe kariri ọkara nke ndị ahịa m ahọrọla ikpo okwu na-enweghị talent dị n'ime ya. N'ihi ya, ha kwụsịrị ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ na-ere ahịa iji jikwaa ya. Ego ahụ na-ebelata nlọghachi nke itinye ego na nwedịrị ike ịme ka ọ bụrụ mfu. Ndị ụlọ ọrụ na-abụkarị ndị dị mkpa na-enyere gị aka na ntinye MAP gị, mana ọ bụ nnukwu ego maka ọtụtụ obere azụmaahịa pere mpe iji were ha na-aga n'ihu.
Businesseszụ ahịa ndị ọzọ na-ahọrọ ime nke ọma n’otu ụlọ ha. Otú ọ dị, n'oge usoro mmefu ego, ọtụtụ na-echefu ịhazi atụmatụ ọzụzụ n'ime ego azụmaahịa ha. Ihe ngwọta ọ bụla chọrọ nkà dị mkpa; ya mere, ụgwọ ọzụzụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, Marketo bụ azịza nke onye ọrụ na-akwụ ụgwọ ọzụzụ ọzụzụ nke ihe dị ka $ 2000 AUD na Australia. N'aka nke ọzọ, ọzụzụ ọzụzụ Salesforce na-akwụ ụgwọ n'efu Ilzọ ụkwụ.
Tụlee mmefu nke akụ mmadụ gị na nkuzi ha mgbe ị kpebiri n'igwe.
Emehie 4: MAP Nke Ndị Ahịa Agaghị Eji
MAP nwere ike ịkọwa ọdịnihu gị na ndị ahịa n'ụzọ ọ bụla ịchọrọ ya. Nke a abụghị naanị maka ihe data ị nwere, kamakwa ị na-ezubere iche ebe onye ahịa nọ na njem ha ma ọ bụ ahịa ndụ. Izipu ozi ziri ezi n'oge ziri ezi dabere na omume ndị ahịa ha ga - abawanye uru ndị ahịa… na - abawanye na ROI gị.
Ọzọkwa, ọtụtụ ndị na-ere MAP bụ isi na-eme nyocha A / B iji bulie nsonaazụ mgbasa ozi. Nke a ga - akwalite nsonaazụ ahịa gị… site na imelite oge yana izipu ozi ị na - eziga onye ahịa gị. Chọta ndị ahịa na omume ha, na ịkekọrịta ìgwè mmadụ ọ bụla ga-eji ọdịiche omume na-azụ ndị ahịa.
Họrọ ezigbo ngwọta MAP adịghị mfe ma na-echebara echiche gabiga ụgwọ nke ikpo okwu. N'ezie, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ gị MAP ego ghara ịnapụta… ma ọ dịkarịa ala ndị a 4 nkịtị emehie ga-mma gị Ohere nke n'ụzọ zuru ezu na-amata gị ego!
Ọ bụrụ n'ịchọrọ enyemaka ọzọ n'ịhọrọ otu, biko gbasapụ ma anyị nwere obi ụtọ inyere aka.
Tags: omume ndị ahịaakpaaka emailemail automation automationakpaaka ahịa ahịaigosi ihe ngosimapahịa akpaaka n'elu ikpo okwuỌzụzụ Azụmaahịaahịa efuROI
Bob Croft bụ onye ndu martech ahụmihu n'ime mpaghara APAC, soro ndị ahịa iri na ise rụọ ọrụ na afọ 15 gara aga gafee ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Drip: Kedu ihe Njikwa Mmekọrịta Ndị Ahịa nke Ecommerce (ECRM)?